मातृ-संदेश : अरबौँ वात्सल्यका पलहरू | Infomala
मेरा प्राणप्रिय: छोरीहरू,
विगत केही दिनहरूमा तिमीहरू सार्है तड्पियौ हगी। मेरो वियोगमा हृदय नै निस्कने जसरी मुर्छित-रोदनमा छरपष्ट मातृ-प्रेम मैले मेरो अनन्तको आत्मा-यात्रामा हर्ष-विभोर छर्लङ्ग देखेँ। तर हक्कानिंदै हक्कानिंदै पनि मेरा छोरीहरू, तिमीहरू सम्हालिएर वढ्यौ र हेर्दा-हेर्दै मलाई प्रभु-चरणमा पुराएर आफ्ना कर्तब्यहरू पूरा गरेरै छाड्यौ। तिमीहरूजस्ता छोरीहरू हुनु नै त म आमा हुनुको गर्व र आत्माभिमान थियो। यो आत्माभिमान त मेरो नीजत्व हो र मैँसँग हमेशा-हमेशा अनवरत रहिरहन्छ छोरीहरू। वाह, छोरीहरू हुनु त मेरा छोरीहरू जस्तो पो त !!
तिमीहरूलाई लाग्दो हो, यो वज्रपात कस्तो पापी र दुर्दिन नियती बनेर आयो भनेर। तर यै त मेरो कर्म-भोग थियो छोरीहरू। त्यो मर्त्य-भोग त प्रभुले मलाई आँफैभित्र आत्माविलिन गराउनुअघिको छोटो तर सार्है सुन्दर वरदान मात्रै थियो। अब यो प्रभु-विलिन अनन्त सुख-भोगमा त्यो तिमीहरूसँगको मातृत्व-भोगपनि सुनमा सुगन्धझैँ थपिएपछी त मैले मेरो अनन्त महा-निर्वाण पो पाँए त छोरीहरू। तिमीहरूसँगका अरबौँ वात्सल्यका पलहरू मेरो अबका अनन्त-बर्षहरूसम्मकालागी असिमित माया र सम्झनाका सुन्दर निधिहरू हुन्। हो, तिमीहरूलाई खबरै नगरीकन अकस्मात् म मेरो अलौकिक यात्राामा फर्कनु पर्‍यो। तर, यत्रो जीवनभर कहिल्यै नरिसाएका मेरा छोरीहरू, मेरो यो महा-निर्वाणको यात्रामा पनि मसँग नरिसाउनु है। तिमीहरू रोएको त हेर्न नसक्ने मेरो यो मन, तिमीहरू रिसाएकै त म कसरी पो देखूँ र छोरीहरू! यति सुन्दर र बिना रोदन-क्रन्दनको, झपक्क आँखा झिम्काएसरी, कसैको ऋणमा एक-पल पनि नडूबी प्रभु-नगिच हुन पाएको यो नश्वर देह-त्याग, मेरो जन्मसँगै प्रभुले लेखिदिनुभएको भाग्य-अक्षर थियो छोरीहरू। तिमीहरूकी त म आमा हुँँ छोरीहरू, जती बर्षहरूसम्म बाँचेपनि हर्षले त कहाँ जान दिन्थ्यौ र! तर हृदयले मान मेरा प्रिय छोरीहरू,यही र यति मात्रै मेरो मर्त्य-भोगको सिमित तर अन्यन्त सफल र सुन्दर भोगाइ-क्षण थियो।
फर्केर हेर्दा, हाम्रा जीवन-गोरेटाहरू त्यती समतल सम्याइएका त कहाँँ थिए र हगी! तर ती संघर्षपूर्ण अग्ला-होचा,नागबेली र अँध्यारा दिनहरूमा मेरा हर जीवन-क्षण स्वर्णीम,आनन्दित,र पुलकित गराउने तिमीहरू नै त थियौ। पुत्र-मोहपोशमा जकडिएको त्यो आदिम मैले बाँचेको युगमा,तिमीहरूका हरेक जन्महरूमा मैले प्रण लिने गर्थेँ की,यी मेरा सबै छोरीहरूलाई म एकदिन यति शिक्षित, प्रबल, र स्वावलम्बी बनाउँ की, मलाई आज हीन-नजरले असहाय,बिचरा भन्ने ती हेय दृष्‍टि र हेराइहरू, स्वयम् भोली तिमीहरूलाई उदाहरण दिएर ‘सन्तान हुनु त यस्तो पो त’ भनुन् र म त्यो स्व-अभिमानको सारगर्वित दृश्यपान गर्न पाँउ। हेर त, भगवानले मेरो पवित्र-प्रणको आज मेरो कत्रो इज्जत राखिदिनुभयो। आज तिमीहरू सबै उच्च शिक्षित-दीक्षित भएर आफ्नो स्वावलम्बन-कर्ममा पखेँटा फिँजाउँदै विचरित गर्दै बढ्दै गयौ र म पनि गर्वले छाती पुलकित फुकाएर ‘म यिनै छोरीहरूकी आमा हुँँ’ भन्दै हर्षोच्छादित, तिनै नजरहरूसँग नजर मिलाउँदै आँफू बाँचेको परिवेश निहाल्दै बढिरहेँ। मलाई तिमीहरू सबैले सगौरव यो दिन देखायौ छोरीहरू, म कति कृतज्ञ छु तिमीहरूप्रती। मेरा हरेक स-साना संशयहरूलाई पनि पूर्ण-निस्तेज गर्दै,मेरा हरेक प्रणहरूलाई आफ्ना संकल्पहरू बनायौ छोरीहरू, र ‘मेराहरूको लोक’मा मेरो इज्जत राखिदियौ। वाह, क्याबात, स्याबाश छोरीहरू। हेर त, त्यस्ता घोर-दिनहरूमा पनि तिम्रा बुबाले कहिल्यै मेरो साथ छोडिदिनुभएन, लोकको अगाडी हमेशा मसंगै पहाडझैँ स-गौरव उभिरहिदिनुभयो र चट्टानझैँ अडिग भइदिनुभयो। तिमीहरूका सफलताका हर कण-कणमा, तिमीहरूले टेकेका हर पाईला-पाईलाहरूमा, यँहासम्मकी तिमीहरूले लिने हर श्वासहरूमा, बुबाले बगाएका अनन्त: पसिनाहरू, रगतहरू, र अठोटहरू छन्। ती हामीहरू दुबैले तिमीहरूमाथी बुनेका र कल्पेका सपनाहरू, कालान्तरमा तिमीहरूले बिपनाहरू बनेर हाम्रा आँखाहरूमा बसाइदियौ छोरीहरू। हर दुखहरूले सुख बनेर आलिंगन गरे, र तिमीहरूले हाम्रा संघर्षहरूप्रति अत्यन्त स्वप्निल न्याय गर्यौ छोरीहरू!
अब त झन् मसित तिमीहरुकालागी प्रभु-समाहित असंख्य माया र आशिर्वचनहरू छन्, र तिमीहरूलाई अनवरत देखिरहने यो सिंगै महाकाश छ। तिमीहरू सबै आफ्नालागी मात्रै नभै, यो सम्पूर्ण जगत र मानव-कल्याणकोलागी प्रयुक्त हुन सक, तिमीहरू सम्पूर्णका दाम्पत्य-जीवन सुखद र प्रिय रहिरहोस्,तिमिहरू सम्पूर्णका सन्तानहरूप्रती मेरो र प्रभुको स्नेह र आशिर्वाद हमेशा रहिरहोस्, तिमीहरूका हरेक कर्महरूमा मैले सदैव: गर्व र स्व-अभिमानले शिर ठाडो र उचो राख्न पाइरहुँ। तिमीहरू मेरा कुलीन छोरीहरू हौ,यो इज्जत लिएर म हमेशा प्रभु-चरणमा पनि शानले रहिरहन पाइरहुँ। मलाई निसंकोच विश्वास छ,तिमीहरूले हमेशा मेरो इज्जत र प्रतिष्ठा बढाइरहने छौ,र म मेरो माया र आशिर्वाद सदैव पठाइरहने छु।
मेरो लौकिक अन्तिम यात्रामा र अन्तिम कार्यक्रममा समाविष्ट सबै बन्धु-बान्धव, इष्ट-मित्र, सगोत्री परिवार-जन, छिमेकी-जनहरू सम्पूर्णलाई मेरो हार्दिक नमन,कृतज्ञता,र स्नेह सुनाइदिनु है । मेरा कति स्नेही बन्धु-बान्धव हुनुहुँदोरहेछ भन्ने त म यो महाकाशबाट हेरिरहेको छु।
मैले बुबालाई नितान्त भन्नुपर्ने कुरा मैले यँहा तिमीहरूलाई भनेको छैन। त्यो मैले बुबालाई नै भनिसकेको छु, तिमीहरू निसंकोच रहनु। बुबाको स्वास्थ्य, हेर-बिचार,र लालन-पालनको मैले केही सुर्ता लिएको छैन। तिमीहरूजस्ता योग्य र होनहार छोरीहरू भएपछी म किन सुर्ता लिईरहूँ र हगी!! बुबालाई म मेरा छोरीहरूले गरेको कर्तव्य-परायणता हेरेरै मुस्कुराइरहेको हुनेछु।
छोरीहरू, अब यहाँँपनि मेरो जाने बेला भयो। मलाई हाँसेर बिदा गर। म तिमीहरूले सोचेको जस्तो टाढा गएको छैन। म त तिमिहरूकै वरिपरी तिमीहरुकै कुराहरु सुनेर बसिरहेकी छु। तिमीहरू दिदि-बहिनीहरूको यो स्नेह, प्रेम, हाँसखेल, र हृदय-स्पन्दन देखेरै मुस्कुराइरहेकी छु। तिमीहरुको यो हृदय-प्रेम सदैव देखिरहन पाउँ र हाँसिरहन पाउँ। तिमीहरुका हरेक दु:ख र सुखहरुमा म त्यँही वरिपरी चलमलाईरहेको हुन्छु। तिमीहरुका सन्तान, तिनका सन्तान, र तिनका पनि सन्तानहरूमा, र तिनका हरेक कर्महरूमा म नाँच्दै, हाँस्तै वात्सल्य बाँडिरहेको हुन्छु। कहिले हावा बनेर सरर स्पर्शित हुन आँउछु त कहिले पानी बनेर कलकल छुन आँउछु। गर्मिहरूमा शितल बनेर आँउछु, जाडोहरूमा घाम बनेर आँउछु। कहिले बादल बनेर आँउछु त कहिले इन्द्रेणी बनेर आँउछु। कहिले सपनाहरू बनेर आँउछु त कहिले सोचहरू बनेर आँउछु। तर कहिल्यै पनि खहरे र बाढीहरू बनेर आउन्न, दु:ख र आँशुहरू बनेर आउन्न, चट्याङ् र गर्जनेहरू बनेर आउन्न। म तिमीहरूकी आमा हुँँ,आमैजस्तै शितलता र वात्सल्यमात्रै लिएर आँउछु ।
छोरीहरू, मलाई हमेशा माया र मुस्कुराहटहरूले मात्र सम्झिए है। म पनि माया र मुस्कुराहटहरूले मात्रै सम्झन्छु। प्रभुले फेरी जन्म दिनुभयो भने,लाखौंँलाख बर्षहरूसम्मपनि म तिमीहरूकै र मात्र तिमीहरूकै मात्रै आमा बनेर बाँचिरहन पाइरहुँ र यो वात्सल्य भरिरहन पाइरहुँ। तर अर्को जन्म पाइन भनेपनि, विना कुनै क्लेश र द्वेष, यँही प्रभु-चरणबाटै तिमीहरूकालागी स्नेह, आशिर्वाद, र प्रार्थनाहरू गरिरहन पाँउ।
छोरीहरू,मलाई रोएर नसम्झिनु ल, नत्र मेरा पनि आँशुहरू खस्छन्। सबैजना सुख र शान्तसँग बस ल। म पनि सुख र शान्तसँगै बसिरहेकी छु। अहिलेलाई गएँ ।तर म आइरहन्छु!
तिमीहरूकी र मात्र तिमीहरूकी,
– हाल, क्यानडा
Previous Postब्रसेल्समा नेपाली स्कुल लोकप्रीय बन्दै
Next Postबिदेशीसँगको बिहे : ह्याप्पी इन्डीङ् होला ?
Post category:Blogs / समसामयीक